Asomafo Nnwuma 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 13:1-52
Wɔmaa Barnaba ne Saul kɔyɛɛ asɛmpatrɛwfo (1-3)
Wɔkɔkaa asɛmpa no wɔ Kipro (4-12)
Paul kaa asɛm no wɔ Antiokia a ɛwɔ Pisidia (13-41)
Wɔhyɛɛ nkɔm sɛ wɔbɛdan akɔ amanaman no nkyɛn (42-52)
13 Ná adiyifo ne akyerɛkyerɛfo wɔ Antiokia asafo no mu.+ Wɔne Barnaba ne Simeon a wɔfrɛ no Niger no, ne Lukio a ofi Kirene, ne Manaen a wɔtetee ɔne Herode a ɔyɛ ɔmantam sodifo no, ne Saul. 2 Bere a wɔresom Yehowa* na wɔreyɛ akɔnkyen* no, honhom kronkron kae sɛ: “Munyi Barnaba ne Saul mma me,+ na wɔnkɔyɛ adwuma a enti mefrɛɛ wɔn no.”+ 3 Na bere a wɔyɛɛ akɔnkyen na wɔbɔɔ mpae wiei no, wɔde wɔn nsa guu Barnaba ne Saul so, na wogyaa wɔn kwan. 4 Enti saa mmarima a honhom kronkron asoma wɔn yi kɔɔ Seleukia, na wofii hɔ de po so hyɛn kɔɔ Kipro. 5 Bere a woduu Salami no, wofii ase kaa Onyankopɔn asɛm no wɔ Yudafo hyia adan mu. Ná Yohane nso ka wɔn ho reboa wɔn.*+ 6 Bere a wɔfaa supɔw no nyinaa so koduu Pafo no, wohyiaa Yudani barima bi a wɔfrɛ no Bar-Yesu. Ná ɔyɛ osumanni ne odiyifo torofo. 7 Ná ɔka ɔmantam soafo* Sergio Paulos a ɔyɛ onyansafo no ho. Sergio Paulos frɛɛ Barnaba ne Saul baa ne nkyɛn, na na ɔrepɛ Onyankopɔn asɛm atie denneennen. 8 Nanso osumanni Elima (ne din no asekyerɛ ne osumanni) fii ase sɔre tiaa wɔn, na ɔyɛe sɛ ɔbɛdan ɔmantam soafo no afi gyidi no ho. 9 Ɛnna honhom kronkron hyɛɛ Saul a wɔsan frɛ no Paul no ma, na ɔhwɛɛ Elima dinn. 10 Na ɔkae sɛ: “Ɔbarima a nsisi ne bɔne nyinaa ayɛ wo ma, Ɔbonsam ba+ a ɔte sɛ wo, trenee nyinaa tamfo, enti wunnyae sɛ wokyea Yehowa* akwan a ɛteɛ no? 11 Hwɛ! Yehowa* nsa da wo so, na w’ani befura, na worenhu owia hann kosi bere bi.” Prɛko pɛ, n’ani so yɛɛ no kusuu, na baabiara yɛɛ sum maa no. Na okyin hwehwɛɛ obi a obeso ne nsa akyerɛ no kwan. 12 Bere a ɔmantam soafo no huu nea asi no, ɔbɛyɛɛ gyidini, efisɛ Yehowa* nkyerɛkyerɛ no maa ne ho dwiriw no. 13 Na Paul ne wɔn a wɔka ne ho no faa po so fii Pafo, na wokoduu Perga a ɛwɔ Pamfilia. Na Yohane+ de, ogyaw wɔn hɔ san kɔɔ Yerusalem.+ 14 Nanso wɔn de, wofii Perga baa Antiokia a ɛwɔ Pisidia. Bere a wɔkɔɔ hyiadan mu+ Homeda no, wɔkɔtenaa ase. 15 Bere a wɔkenkan Mmara+ ne Adiyifo no wɔ baguam wiei no, hyiadan mu mpanyimfo no soma kɔɔ wɔn nkyɛn kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mmarima, anuanom, sɛ mowɔ asɛm bi a mode bɛhyɛ nnipa yi nkuran a, monka.” 16 Enti Paul sɔree, na ohim ne nsa kae sɛ: “Mmarima, Israelfo ne mo a musuro Onyankopɔn, muntie. 17 Israel man yi Nyankopɔn paw yɛn agyanom, na ɔmaa wɔn so bere a na wɔyɛ ahɔho wɔ Egypt asaase so no, na ɔde nsa* a wɔama so yii wɔn fii hɔ.+ 18 Na bɛyɛ mfe 40 no, onyaa wɔn ho abotare wɔ sare no so.+ 19 Bere a ɔsɛee aman ason wɔ Kaanan asaase so wiei no, ɔde wɔn asaase maa yɛn agyanom sɛ agyapade.+ 20 Ne nyinaa sii bɛyɛ mfe 450 mu. “Ɛno akyi no, ɔmaa wɔn atemmufo de besii odiyifo Samuel so.+ 21 Nanso efi hɔ no, wɔkae sɛ ɔmma wɔn ɔhene,+ na Onyankopɔn de Kis ba Saul, ɔbarima a ofi Benyamin abusuakuw+ mu no maa wɔn, na odii wɔn so mfe 40. 22 Bere a otuu no fii ade so no, oyii Dawid maa wɔn sɛ ɔhene,*+ na odii ne ho adanse sɛ: ‘Mahu Yese ba+ Dawid. Ɔyɛ ɔbarima a ɔyɛ nea me koma pɛ.+ Ɔno na ɔbɛyɛ nea mepɛ nyinaa.’ 23 Sɛnea Onyankopɔn hyɛɛ bɔ no, saa ɔbarima yi aseni* na Onyankopɔn de no ama Israel sɛ agyenkwa; ɔno ne Yesu.+ 24 Ansa na saa nipa no reba no, Yohane ka kyerɛɛ Israelfo nyinaa wɔ baguam sɛ wɔmmɔ asu mfa nkyerɛ sɛ wɔasakra wɔn adwene.+ 25 Bere a Yohane dwumadi reba awiei no, ɔkae sɛ: ‘Mususuw sɛ meyɛ hena? Menyɛ ɔno. Nanso, hwɛ! Obi di m’akyi reba, na memfata sɛ mesan ne nan ase mpaboa.’+ 26 “Mmarima, anuanom, Abraham abusua asefo ne wɔn a wɔwɔ mo mu a wosuro Onyankopɔn, yɛn na wɔde nkwagye yi ho asɛm abrɛ yɛn.+ 27 Na wɔn a wɔtete Yerusalem ne wɔn sodifo no anhu no, nanso bere a wɔrebu no atɛn no, wɔmaa nea na Adiyifo no aka+ a wɔkenkan no den homeda biara no baa mu. 28 Wɔanhu hwee wɔ ne ho a enti ɛsɛ sɛ owu,+ nanso wɔka kyerɛɛ Pilato sɛ onkum no.+ 29 Na bere a wɔyɛɛ nea wɔakyerɛw afa ne ho nyinaa wiei no, woyii no fii dua no so, na wɔde no too ɔda mu.+ 30 Nanso Onyankopɔn nyan no fii awufo mu,+ 31 na wɔn a wɔne no fi Galilea kɔɔ* Yerusalem no huu no nna pii. Wɔn na seesei wodi ne ho adanse kyerɛ nkurɔfo.+ 32 “Ɛno nti, ɛbɔ a wɔhyɛɛ yɛn agyanom no, ɛho asɛmpa na yɛreka akyerɛ mo no. 33 Onyankopɔn anyan Yesu+ ama saa bɔhyɛ no aba mu koraa ama yɛn a yɛyɛ wɔn mma no, sɛnea wɔakyerɛw wɔ dwom a ɛto so abien no mu no. Ɛka sɛ: ‘Woyɛ me ba; ɛnnɛ mabɛyɛ w’agya.’+ 34 Nyan a Onyan no fii awufo mu a ɛremma bio sɛ ɔbɛsan akɔ ɔporɔw mu no, Waka ho asɛm saa kwan yi so sɛ: ‘Ɔdɔ a enni huammɔ a mehyɛɛ Dawid bɔ sɛ mɛda no adi akyerɛ no no, ɛno na mɛhwɛ ho ahyira mo; sɛnea ɛte biara, ɛbɛba mu.’*+ 35 Wɔasan aka wɔ dwom foforo mu sɛ: ‘Woremma nea odi nokware ma wo no mporɔw.’*+ 36 Na Dawid de, ɔsom Onyankopɔn wɔ ɔno ara n’awo ntoatoaso mu, na owui,* na wosiee no n’agyanom nkyɛn, na ɔporɔwee.*+ 37 Nanso nea Onyankopɔn nyan no no de, wamporɔw.*+ 38 “Enti anuanom, munhu sɛ, oyi na yɛnam no so reka bɔnefakyɛ ho asɛm akyerɛ mo,+ 39 na munhu sɛ, nneɛma a wɔantumi amfa Mose Mmara+ so ammu mo bem wɔ ho no, wɔnam oyi so abu obiara a ogye di no bem wɔ ho.+ 40 Enti monhwɛ yiye na nea wɔaka wɔ Adiyifo no mu no amma mo so. 41 Wɔaka sɛ: ‘Mo animtiaabufo, monhwɛ ma ɛnyɛ mo nwonwa na monyera, efisɛ mereyɛ adwuma bi wɔ mo bere so. Saa adwuma no, sɛ obi ka ho asɛm nyinaa kyerɛ mo mpo a, morennye nni da.’”+ 42 Na bere a wɔrefi hɔ akɔ no, nkurɔfo no paa wɔn kyɛw sɛ, Homeda a edi hɔ no, wɔmmɛka nsɛm yi nkyerɛ wɔn bio. 43 Bere a hyiadan no mu nhyiam no baa awiei no, Yudafo ne wɔn a wɔasakra abɛyɛ Yudafo, a wɔsom Onyankopɔn no pii dii Paul ne Barnaba akyi. Na Paul ne Barnaba kasa kyerɛɛ wɔn, na wɔhyɛɛ wɔn nkuran sɛ wɔnkɔ so ntena Onyankopɔn adom mu.+ 44 Homeda a edi hɔ no, kurow no mufo dodow no ara hyiaam sɛ wɔrebetie Yehowa* asɛm. 45 Bere a Yudafo no huu nnipadɔm no, ahoɔyaw hyɛɛ wɔn ma, na wofii ase kaa abususɛm de bɔɔ nea Paul reka no gui.+ 46 Enti Paul ne Barnaba de akokoduru ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mo na na ehia sɛ yɛka Onyankopɔn asɛm kyerɛ mo kan.+ Nanso esiane sɛ morepia ato nkyɛn, na mummu mo ho sɛ mofata daa nkwa nti, hwɛ! yɛredan akɔ amanaman no nkyɛn.+ 47 Efisɛ Yehowa* aka asɛm yi akyerɛ yɛn sɛ: ‘Mayi wo sɛ amanaman no hann, sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛyɛ nkwagye de akodu asaase ano.’”+ 48 Bere a amanaman mufo no tee eyi no, wofii ase dii ahurusi na wɔhyɛɛ Yehowa* asɛm anuonyam, na wɔn a wɔwɔ koma pa a ebetumi ama wɔanya daa nkwa no nyinaa dan gyidifo. 49 Bio nso, wɔkɔɔ so kaa Yehowa* asɛm no wɔ asaase no nyinaa so. 50 Nanso Yudafo no tutu guu mmea a wɔwɔ din a wosuro Onyankopɔn no asom, na wotutu guu kurow no mu atitiriw no nso asom,+ na wɔtan Paul ne Barnaba ani, na wɔpam wɔn fii wɔn asaase so. 51 Enti wɔporoporow wɔn nan ase mfuturu guu wɔn so, na wɔkɔɔ Ikoniom.+ 52 Na anigye+ ne honhom kronkron kɔɔ so hyɛɛ asuafo no ma.
^ Anaa “wɔredi mmuada.”
^ Anaa “Ná Yohane nso ka wɔn ho sɛ ɔsomfo.”
^ Anaa “basa.”
^ Anaa “ɔmaa Dawid so maa wɔn sɛ ɔhene.”
^ Anaa “foro kɔɔ.”
^ Anaa “nhu porɔwee.”
^ Nt., “ɔdae.”
^ Anaa “ohuu ɔporɔw.”
^ Anaa “wanhu ɔporɔw.”
Asomafo Nnwuma 13